Home Wararka U Sedburinta Reer Waqooyiga ee 4.5 Waa in Dib loo eegaa Lana...
U Sedburinta Reer Waqooyiga ee 4.5 Waa in Dib loo eegaa Lana Saxaa!
Gabaygaan ayaa u yaalla maanta dadka Reer Waqooyiga ah : Nin Dharbaaxo Quureed-dugsaday Dhaqayadeed Maalye, Dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide. Ceebtaan waa idin la taal ee iska meysa reer Waqooyiyow.
Nidaamka Dalka ka jiro weligood dadka reer waqooyiga waxay ku lahaayeen cad muhiim ilaa iyo haddana ay ku leeyihiin, xataa waxaa mudnaanta laga siiyaa dadka mudan marka ay timaado Somalininada iyo ilaalinteeda. Dadka ka soo jeeda degaanadda gobollada waqooyi waxaa caado u ahaa in muddo ahba kaagana kula lihi keygana anigaa iska leh. Dadka aan tirada lahayn ee ka shaqeysta Koofurta ee ka soo jeeda waqooyiga marka ay Hargeysa iyo Burco guryo ka dhisanayaan oo ay ku maalgashanayaa lacagtii ay koofurta ka shaqeysteen wa la soo dhaweeyaa waana la amaanaa, laakiin maalinta ay midnimo ka hadlaan waa lala dagaalaa, waana munaafaqad cad.
Waxaa kaloo Madaxada Reer Waqooyiga ay reer Koofureed u yaqaannaan Hawiye iyo Digil & Mirifle oo hadda iyaga kaliya ayaa la soo tarxiilay, waana dareen cusub oo dadkaas lagu abuuray. Hawiyaha oo inta badan Somali Somali ku qarwa iyo Digil iyo Mirifle oo iyagana loo dhibaateeyey inay reer koofureed isla yihiin Hawiyaha codadkooda ha ku aarsadaan xelliga doorashaoooyinka ay dhacayaan hana soo saartaano madax ay ku heshiis yihiin oo ku sharafta Somalinimada xaqoodana ka siisa Jamhuuriyadda iyo 4.5keeda. Haddii laga gudbo 4.5 cidi uma baahan doonaan oo tiro iyo tayo ayey leeyhiin labadaan beelood.
Dareenka ay arrinta waxashnimada leh ee ka dhacday Laascanood oo 700 oo reerood oo hawiye iyo D&M lagu soo tarxiiley ee Faysal Cali Waraabe uu ku jeesjeesayo waxay keentay in bal dib loo xisaabiyo maxay reer waqooyiga ku leeyihiin Jamhuuriyadda ay hagardaameynayaan Faysal iyo Muuse Biixi.
Hey’adaha dalka waxaa ka shaqeeya dad aad u badan oo reer waqooyi ah, mana aha inaysan xaq u lahayn ee waxaan rabnaa inay kala caddaato inay abaal laaweyaal yihiin oo ay Somalida kale kaga beerlaxawsanayaan aragtida ah inay ka maqan Koofurta oo ay ku qatan yihiin.
Wasiirka Maaliyadda 2. Agaasimaha Guud W/Maaliyadda 3. Guddoomiyaha Bankiga Dhexe
Madaxa Deyn cafinta Dalka 5. Madaxa Machadka Canshuuraha 6. Madaxa Mashruuca AFDB 7. Madaxa Mashruuca Dryland 8. Isku duwaha mashaariicda horumarinta ee Soomaaliya iyo Deeq bixiyeyaasha
Marka la eego dhinaca siyaasada waxaa kuu soo baxaya inay Door muhiim ah ku leeyihiin sida:
1.Guddoomiyaha Aqalk Sare2. RW ku xigeen ka Dalka 3. Wasiirka Warfaafinta 4. Guddoomiye K/X Guddiga Xuduudaha 5. Wasiirka Dastuurka 6. Wasiir ku xigeenka Waxbarashada. 7. 50 Xildhibaan Golaha Shacabka ah 8. 11 Senotar Aqalka Sare 9. Agaasimaha Guud Wasaaradaha waaweyn ee dalka.
Xagga Diblomaasiyadda iyo siyadda dibadda
Waxay leeyihiin 45 mas’uul oo isugu jira Safiirro, Qunsullo iyo Sarkaal Safaaradeed oo sarsare.
Hay’adaha Garsoorka Dalka
Guddoomiyaha Maxakmadda Sare 2. Agaasimaha Guud W/ Garsoorka 3. Iyo 11 Garsooreyaal Sar sare.
Taliyaha Booliiska 2. Wasiir Dowlaha Amniga 3. NISA waxay ku jira 53 Sarkaal Sare oo Nabad Sugidda ah. 4. Ciidanka Boliiska Somaliyee 89 Saraakiil Sare oo Booliiska 5. Ciidanka xoogga dalka waxaa sakiil sare ah 96 Saraakiil sare. 6. Taliye xigeenka Asluubta oo sarkaal awood badan ah iyo 9. Taliye xigeenka Ciidanka badda.
Kama hadleyno ciidanka hoose dableyda, Alifleyda, saraakiil xigeennada oo kumanaan gaaraya.
Hay’adaha Adeega Bulshada
Shaqaalaha Rayidka ka shaqeeya hay’adaha kala duwan ee dalka waxay reer waqooyi ah 2700 Shaqaalaha Rayidka Dowladda dhexe iyo 1890 Shaqaalaha Mashaariicda kala duwan ee dalka ay intaa habaarayaan Feysal Cali Waraabe iyo Muuse Biixi. Mashaariicda horumarineed ee deegaanada Soomaaliland 50% Xagaas ayaa laga fuliyaa waliba iyagoo qoondo gaar ahaaneed leh .
Dhinaca Ganacsiga Xorta ah.
Dahabshiil waa shirkad aad u muuhiim ah waana shirkad reer waqooyi ah weligeedna lama dareensiin inay reer waqooyi tahay waxaa mar waliba loola dhaqmaa shirkad Somaliyeed wayna ahaan doontaa. Markii ay Abaarihii dabadheer dhaceen waxaa kumannnaan reer waqooyi ah la soo dejiyey Cadale oo dhul Hawiye ah iyo Dujuma iyo Sablaale oo dhul D&M iyadoo raggii ku koray ee wax ku bartay uu ka mid yahay Feysal Cali Waraabe oo maanta masaakiin caruur iyo hooyooyin qawan oo habeen bar ku diganaya sidii ay cadow yihiin.
Dhinaca Amnidarrada Dalka iyo Reer Waqooyiga.
Dadka ugu badan ka shaqeeya amnidarrada waxaa hoggaanka u haya waa ree Waqooyi laga soo bilaabo Axmed Godane, Ibrahim Afgaan, haydda oo uu weli madax ama Amiir ka yahay shabaab ka ku qubeysta dhiigga Muslimiinta Koofureed waa nin isku qariya Axmed Cabdikariin Abuu Cubeyd. Abu-Cubeydah oo codka laga duubay uu kaga warramay weerarki Magaalada Muqdisho ka dhacay bishi Luulyo oo lagu dilay Duqii Magaalada Muqdisho Cabdi Raxmaan Cumar Cusmaan injiner Yariisow. iyo weliba Xildhibaankii ugu horreeyey is qarxiyey Saalax Badbaado wuxuu ahaa reer waqooyi. Sow tani aburis ammaan darro weyn maxaa loo raafi waayey dadka ka soo jeeda waqooyiga?. Sababtu waa dadka Hawiyaha iyo D&M kuma eedeynin qabiillada waqooyiga ee waxay ku eedeyeen arrinkaan Shakhsiyaad waana sida ay qabto diinta Islaamka ee ah inaan qofna loo qabsan Karin dembi qof kale galay.
Mar kale Dadka reer Somaliland waxay aad uga macaasheen nidaanka 4.5 oo aan si sax oo siman loo dhaqangelin, waana arrin u baahan inay Hawiyaha iyo D&M codsadaan qeybtooda saxda oo u dhiganta inta ay dowladnimada ku biiriyaan haddii kale waxay keeneysaa in maalin ay dowladnimada u dunto caddaalad darrao iyo Dulmi lagu hayo labadaan Beelood oo deggan dhulka ugu mudan dalka, kuna bixiya dhaqaalaha ugu badan dowlad dhiska Somaliya.
Xataa Golihii Sare ee Dalka baabi’iyey waxay ku lahaayeen 9 Xundood halka D&M aysan xubin qura ku lahayn, maantana waxay dunida u sheegaan waxaa na baabi’iyey dowladdii kacaanka iyo Reer Koofureed, waa dowlad ay ka mid ahaayeen oo go’aamadeeda ay u codeynayeen. Reer waqooyiga si dhab ah ha loola xisaabtamo oo runta ha loo sheego si beenta iyo marin habaabinta damaaca gaaban u soo baxo kadibana Somaliada xorta ay gacmaha isu qabsadaan geyigaana uga muuqdaan.
Ugu damebeyn waxaa xusuus mudan:
Somaliland waxay ka macaashtay nidaamka 4.5 oo aan si sax wax ah wax loogu maamulin
Somaliland waxaa ka soo jeeda madaxda Alshabaab oo ay sannad waliba amiirada caruurtooda ku dhalaan isbitaalada magaalada Hargeysa.
Somaliland waxaa lagu aaminay in ay shaqaale iyo madax ka noqdaan dhammaan hay’adaha dalka hadana kuwa jooga iyo kuwa maqan intaba maslaxooda uma arkaan aha Midnimo.
Dadka reer Somaliland si shuruud la’ aan ah oo xurriyad leh ayay koofurta uga ganacsadaan iyagoo maalin aan la caburin.
Somaliland dhamaan dhaqaalaha beesha caalamka loo soo marsiiyo Dowladda dhexe si hufan ayaa lagu gaarsiiyaa iyadoo dadkeeda ku seexisa habeenkii ictiraaf iyo inay rabaan in Somaliya ka go’aan waana been cad oo madaxda ayaa rabtaa inay kursiga ku sii haysato, laakiin dhallinyarada, aqoonyahanada, iyo ganacasatada midkoodna waa ogyihiin inaysan ku filleyn seddexdaas gobol .
Soomaalilanda waxaa loogu baaqayaa in ay riyo maalmeedka ka baxaan waxaana la xusuusinayaa ruux guri dhalo ku jiro dhagax tuur ma bilaabo, haddii la go’aansado in Somaliland laga rido qalalaaso wax badan ma qaadaneyso waxaasa Khasab ah in madaxda, qabiilada iyo cuqaasha Hawiyada iyo D&M wadaan wannaagga iyo dadnimada ah inaan loo qabsan dembi uu galay doqon Danley ah shacbiga wanaagsan ee reer Waqooyiga ah.